Magaalo Hindiya ku taalla oo lacag siinaysa ninkii soo sheega qof tuugsanaya - BBC News Somali
Magaalo Hindiya ku taalla oo lacag siinaysa ninkii soo sheega qof tuugsanaya
Lahaanshaha sawirka TS Sudhir
Masuuliyiinta magaalada Hyderabad ee ku taalla Koonfurta Hindiya ayaa 500 oo rupee oo u dhiganta 7 doolar siinaya muwaadiniinta tusa qof tuugsada, arrintaas oo qayb ka ah qorshaha lagu doonayo in magaalada lagaga sifeeyo dadka tuugsada wixii ka dambeeya 15 Decembar.
Taliyaha booliiska ee magaalada ayaa ku dhawaaqay labo billood oo magaalada laga mamnuucay dadka tuugsada.
Dadka arrintan dhaliishan waxay sheegayaan in arrintan ay keentay booqashada ay magaaladaas ku tagayso Ivanka Trump oo ah gabadh uu dhalay madaxweynaha Maraykanka, laakiin masuuliyiintu way diideen arrintaas.
Toddobaadkii hore ayaa la arkay booliiska magaalada oo qaqabanaya dadka tuugsanaya ee ku sugan goobaha lagu cibaadaysto.
Waxaana la gaynayaa xarun dadka dhaqan celin loogu sameeyo oo ku agtaalla xabsiga dhexe ee magaala Hyderabad.
Ivanka ayaa magaalada Hyderabad u tagaysa shirka caalamiga ah ee halabuurka ganacsiga oo dhacaya 28 iyo 29 Novembar.
Qarax galaaftay nolosha Zeyn oo siddeed jir ahaa
Nin jiha qaldan ku socday illaa 500km
Hyderabad ayaa sidan oo kale si ku meelgaar ah u mamnuucday dadka tuugsada sannadkii 2000, markaas oo uu booqday madaxweynihii hore ee Maraykanka Bill Clinton.
Image caption Dadka tuugsada ayaa loo diray goob dadka dhaqancelin loogu sameeyo oo ka agdhaw xabsiga dhexe ee magaalada Hyderabad
"500 ee rupee ee la bixinayo waxaa shaaciyay waaxda xabsiyada oo qayb ka ah qorshaha magaalada lagaga saarayo dadka tuugsada. Ujeedaduna waa in dadku ay ka qaybqaataan fulinta amarkan" sida uu BBC-da u sheegay M Sampat oo madax ka ah xarrunta dhaqancelinta.
"Waaxda xabsiyada ayaa qorshaynaysa in ay dadka tuugsada tababaraan si ay uga shaqeeyaan kaalimaha shidaalka oo aan dad u shaqeeya u gayno" ayuu intaas ku sii daray.
Maamulka gobolka ayaa sheegay in ay ilaa iyo hadda qabteen 366 ruux oo tuugsada, 128 ruux waxay go'aansadeen in ay sii joogaan xarunta dadka dhaqancelinta loogu sameeyo halka 238 ruuxna ay ogolaadeen in ay guryahooda ku laabtaan, iyaga oo ballanqaaday in aysan tuugsan doonin.
"Waxaan isugu yeernaa in aan nahay magaalo ay dad wanaagsan ku nool yihiin, haddana burcad tuugsanaysa ayaa magaaladeenna ku nool kuwaas oo dumarka carruurta wata ku qashqashaada wadooyinka, dadkana ku buufinaya wax lagu sakhraamo iyagoo tuugsanaya, waxaa sidaas BBC-da u sheegay Dr G Ramaiah, oo ka tirsan hey'ad aan dawli ahayn oo ka shaqaysa in bulshadu ay noqoto kuwo aan lahayn dad tuugsada.
Nokia 3310 oo maanta suuqa lagu soo celiyay
“Wax aad u yaab leh” Liibaax dhedig ah oo xannaanaysa Harmacad
Baddankood markii la soo qabtay waxay sheegeen in aysan dad tuugsada ahayn, sida uu BBC-da u sheegay VK Singh oo ah madaxa xabsiga Telangana.
Saraakiishu waxay sheegeen in hawlgalkan uu horseeday in dad lagu qiyaasay 5,000 oo tuugsan jiray ay magaalada isaga cararaan oo ay aadaan magaalooyin u dhadhaw Hyderabad.
Waxay sheegeen in caqabaddu ay noqon doonto, xaqiijinta in aysan magaalada ku soo noqonin marka ay dhammaato xayiraadda ku eg 7 Janaayo ee 2018ka.